जिन्दगीमा यि ३ चिज कसैलाई दान पनि,उपहार पनि र सापटी पनि नदिनुस – Sandesh Munch
घडीले तपाईको समय बताउँछ । राम्रो या ख राब समय घडी र तपाईको प रिस्थितिले जनाउँछ । घडी जुन व्यक्तिले सधैँ प्रयोग गर्ने गर्छ त्यहि व्यक्तिप्रति निर्भर रहेको हुन्छ । अरु कसैको घडी तपाईको नाडीमा बाध्नु भनेको तपाईको जीवनमा अ सर गर्नु हो ।
धन लक्ष्मीको कृपा हो । तर धनले कोही कसैलाई आफ्नो बनाउँन सकिदैन । उदाहरणका लागि तपाईले कसैलाई तलब दिएर राख्नुभएको छ र केहि दिन ढिला भयो भने तपाईमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भैहाल्छ । अनि धनले कसरी आफ्नो बनाउँन सकिन्छ ? शास्त्रका अनुसार धन सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो ।
धनकै कारण कति आ परा धिक घटना घट्ने गरेको समाचार बेलाबेला आइरहन्छ । अझ आफन्तसँग त झन् पैसाको लेनदेन गर्नै हुँदैन । धनकै कारण सम्बन्ध तोडिन पनि सक्छ । हामीले कसैलाई दान गर्दा पैसाको सट्टा अरुनै चिज दिँदा राम्रो हुन्छ ।
त्यस्तै सापटीमा पनि सकभर पैसा नदिएकै राम्रो हुने वा नलिएकै राम्रो । किनभने पैसा सापटी लिएकै दिन त्यो मान्छेको नजरमा तपाई गिर्नुहुन्छ या लिने मान्छे गिर्छ।
Prevकुन-कुन राशीले कालो धागो बाधे भाग्य खुल्छ ? कुन राशीले बाध्नु हुदैन ?
Nextघरमातुलसीको बोटको छेउमा यी ५चिज राख्नुस अतीशुभ हुन्छ भिडियोसहित
नयाँ धरहराको भित्री भाग घुम्दा त’र्साउने ठाउँ भेटियो- हेर्नुहोस भिडियो